यस्तो देखियो ‘कस्मिक लभ’को शुभ मुर्हूत, देशकै चर्चित कलाकारले दिए सफल्ताको शुभकामना (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentयस्तो देखियो ‘कस्मिक लभ’को शुभ मुर्हूत, देशकै चर्चित कलाकारले दिए सफल्ताको शुभकामना (भिडियो)
अर्पण थापा, प्रशान्त ताम्राकार तथा दीया मास्केको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘कस्मिक लभ’ को शुक्रबार राजधानीमा शुभ मुर्हूत गरिएको छ । दरबारमार्गमा रहेको अन्नपूर्ण होटलमा गरिएको मुर्हूत कार्यक्रममा लगभग सबैजसो चर्चित कलाकारहरुको सहभागीता समेत रहेको थियो । मुभी मेकर्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको यो फिल्म रोमान्टिक, कमेडी र सस्पेन्स जनरामा निर्माण हुन लागेको निर्माण टिमले जनाएको छ ।
सुरज प्रधान प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्ममा निर्देशन भने वि.एस बलामी र शंकर अधिकारी संयुक्त रुपमा गर्न लागेका छन् । आजको मुर्हूत कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक बलामीले ‘कस्मिक लभ’ बनिरहेका फिल्महरुभन्दा फरक धारको निर्माण हुने प्रतिक्रिया दिए । त्यस्तै, अहिलेसम्म खेलेका फिल्महरुमा नायक भन्दा पनि धेरै चर्चा कमाउन सफल प्रशान्तले स्क्रिप्टबाट आफूले थाहा पाए अनुसार आफू कप्सको भूमिकामा रहेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । उनले आफूलाई स्क्रिप्ट चित्त बुझेको बताउदै अरु भने विस्तारै खुल्दै जाने जनाए । उनले यसमा आफ्नो भूमिका अन्य फिल्मभन्दा फरक रहने भने खुलासा गरे ।
जे. गौतमको निर्माण तथा डि.एन. दाहाल कार्यकारी निर्माता रहने यस फिल्ममा अर्पण, प्रशान्त र दीयाका अलवा रविन तामाङ, राजाराम पौडेल, पुरन थापा, देव महर्जनलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहनेछ । यो फिल्मबाट रिजन थापाले नेपाली रजतपटमा डेब्यु गर्दैछन् । कविराज गहतराज र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहने फिल्मको गीतमा बवुल गिरीले संगीत भरेका छन् ।
सुरेश बज्रचार्यको छायांकन रहने यस फिल्ममा बाबु साहेवको एक्सनतथा विपिन मल्लको सम्पादन रहनेछ । फिल्मको कथा शेखर ज्ञवालीले लेखेका छन् । कार्यक्रममा चलचित्र संघ, नेपालका अध्यक्ष सन्दिप सापकोटा, नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीप उदय, नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीलगायतको सहभागीता रहेको थियो । उपस्थित कलाकारहरुले फिल्मलाई सफल्ताको शुभकामना समेत दिएका थिए ।